Soo dejisan CM Security 3.1.3.1048 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: CM Security
CM Security – antivirus awood badan leh shaqo ee ilaalinta in waqtiga dhabta ah. CM Security ogaadaa oo ka saaraysaa fayrusyada, kolkaasaa dirxi galay, trojans, spyware, hanjabaado kala duwan iwm software ayaa u qabata baaritaan buuxa ee cusub faylasha, codsiyada, updates, websites u khatar gelin kara. CM Security taageera nidaamka ammaanka heerka multi-ku salaysan dual-dhismaha iyo daruur ku salaysan antivirus engine. Software ayaa sidoo kale kuu oggolaanayaa in aad ka takhalusaan qashin xad-dhaaf ah, xannibi ugu baaqay rabin ama u xaliso dhibaatada sirta.
Ilaalinta waqtiga dhabta ah
Habka scan Full iyo saarista hanjabaad
Block oo ka mid ah oo ku baaqay in aan la rabin
Soo dejisan CM Security
Faallo ku saabsan CM Security
CM Security Xirfadaha la xiriira
AppLock – softiweer lagu xirayo codsiyada, rugta internetka, isku xirka internetka, liiska dejinta, liisaska lala xiriiro ama faylasha kale ee leh eray sir ah.
qalab haboon qaybsiga file degdeg via Wi-Fi. software The taageertaa kala iibsiga xogta in computer ama qalab badan oo isku mar ah.
software The heer sare ah si loo xaliyo dhibaatooyinka helitaanka goobo hor istaagay. software ayaa si toos ah doorto gobolka ee la xidhiidha si mug leh.